​ट्रंप र भारु प्रतिबन्धको असर सुन बजारमा देखिदै,व्यवसायीनै डराउन थाले ,सुन अझै घट्छ - Namaste Post
​ट्रंप र भारु प्रतिबन्धको असर सुन बजारमा देखिदै,व्यवसायीनै डराउन थाले ,सुन अझै घट्छ
आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७ | Sun, 28 February 2021
नमस्ते पोस्ट २०७३, १ पुष शुक्रबार ०६:०० 0
काठमाडौं, पुस १।
विवाहको सिजन भएपनि मंसिर महिनाको शुरु देखिनै घट्न शुरु गरेको सुनको मुल्य महिना भरमा ३५ सयले घटेको छ । मंसिर पहिलो दिन तोलामा ५५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन महिनाको अन्तिम दिन आज ५२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार सुनको भाउ ५२ हजार ६ सय थियो ।
चाँदीको मुल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ । आज चादी प्रतितोला ७९० मा कारोबार भइरहेको छ । किन घट्छ सुन ? सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका निर्वतमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य सुन निरन्तर ओरालो लाग्नुमा अमेरिकी अर्थतन्त्र मजबुत हुदै जानु र भारतीय ५ सय र हजारको नोटको प्रतिबन्धमा देखिएको अदृश्य प्रभावलाई मान्छन् । न्यूजसेवासँग कुरा गर्दै शाक्य भन्छन्,विश्वकै धेरै सुन खपत हुने देश भारतमा नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि ग्राहकले किन्न सकेका छैन् त्यसकारण पनि व्यापार लगभग शुन्य छ ।”
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ट ट्रंप आउनुभन्दा पहिला एक खालको विश्लेषण विश्वले गरेपनि उनको जितसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि मजबुत बन्दै गएको छ । उनले आर्थिक उन्नतिका लागि लिएको नीतिकै कारण अमेरीकी लगानी सेयर र सुन बजारमा भन्दा अन्तै डाइभर्ट भएको छ । अमेरीकी व्यवसायीहरु नै सुन कारोबारमा डराउँदै गएको अवस्थाले पनि सुन बजार निरन्तर ओरालो लागेको निर्वतमान अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय बजारले नै नेपालको सुन बजार निर्धारण गर्ने हुदा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा घट्दा नेपालमा पनि घट्ने र बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने गर्छ । डलर र सुनको भाउबीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ । अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा बढी सुन भण्डारण भएको मुलुक हो । अर्कोतर्फ अमेरिकाको बैंकले ब्याजदर बढाएपछि बिहीबार झण्डै २० डलरले सुनको भाउ घटेपछि त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको हो ।
माग कस्तो छ ? अध्यक्ष शाक्यका अनुसार अमेरिकामा सुन व्यवसायी नै डराएकोले नै पुष्टि गर्छ की अमेरिकामै यसको माग निकै कम छ भने यता भारत मा पनि नोट प्रतिबन्धकै कारण सुन खरिद गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने केही बर्ष अघिसम्म दैनिक ४० केजी सम्म सुनको माग हुने गरेकोमा अहिले विवाहकै सिजनमा पनि २० केजी सम्मको मात्र माग भएको छ ।
सुनको भाउ घट्नुले विवाह गर्ने जोडीलाई राहत पुगेपनि व्यवसायिहरुमा भने एक प्रकारको सन्नाटा नै छाएको छ । यसअघि गत माघ २१ गते सुन तोलाको ५२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसपछि लगातार बढ्दै गएर साउन महिनामा सुनको भाउ तोलामा ५९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
अझै घट्छ सुन अहिलेको अवस्था हेर्दा सुनको मुल्य अझै धेरै घट्नसक्ने अनुमान गर्दै शाक्य भन्छन् “एक हप्ता अघिमात्र सुन ५० हजार पुग्छ भन्नेलाई मैले भनेको थिए ५२ हजारसम्म आउला भनेर । यसैगरी घट्दै जाने हो भने सुनको मुल्यमा उच्च गिरावट आउने देखिन्छ । ”